WARAABE HILIB LAGU RARTEY (DAWLADA HOOSE EE HARGEYSA) | ToggaHerer
← Ra’iisul Wasaare Khayre oo Dawladda Jabuuti uga Mahad-celiyay Tababarka Ciidamada Soomaaliyeed
Daawo: Dhalinyarada Habaryoonis Barri “Garxajis Barri” Oo U Jawaabay Dhalinyarada Dhigooda Ah ee Beelaha Habarjeclo Hadal ay ka yidhaahdeen Degmada Garadag →
WARAABE HILIB LAGU RARTEY (DAWLADA HOOSE EE HARGEYSA)
Published on June 13, 2018 by Magan
Waxa sii siyaadeysa bilic xumada magaalada caasimada ah ee Hargeysa iyada oo ay barbar socoto in dakhligii dawlada hoose kordhay mudadii ay xilka la wareegeen gollaha deegaanka ee uu Mayor Soltelco gadhwadeenka ka yahey. waxa ku cad maqaalka DAKHLIGA DAWLADA HOOSE & DAYACA CAASIMADA oo uu qoray Liibaan Ismaaciil Buraale “in wadarta guud ee dakhliga dawladda hoose ee magaalada Hargeysa yahey $13,371,511,884” taasi oo u dhiganta 133,715,118,840,000 sl shilling. Tiradaasi sida ay ku timi iyo iyadoo faahfaahsanba waxaad ka akhrisan kartaa lingaxanhttps://www.facebook.com/liban.i.abdilahi/posts/10205202040706598.
Dakhligan oo sida ku aad ka arki karto qormada waliba celcelis ahaan halka ugu hooseysa laga soo qaatey ayaa waxa barbar socda Mashaariic kale oo ay dakhliyo dheeraad ah ka helaan sida Mashruuca UNJPLG & kuwa uu Baanka Aduunku la wado Dawladaha Hoose. haddana magaalada Hargeysi way ka qatan tahey oo ka qaawan tahey waxaasi oo dakhli ah. laami laguma dhiso, waxbarasho ha sheegin, caafimaad looguma hawl galin. Wax kale oo ay dawladda hoose mas,uul ka ahaydna wax lagagama qaban.
Marka lasoo hadal qaado waxqabadka dawladda hoose ee Hargeysa dhawr qodob uun baa soo noqnoqda oo ay ka mid yihiin Dabdamiska & dhawr waddo oo qosol ku jab ah. Xili wax la qabtay iyo goob uu wax qabad ka hir galey soo marin maysid madaxda Dawladda Hoose ee Hargeysa. In ay xafiisyada dawladda dhexe ee ku shuqulka leh iyo bulshdaba u soo gudbiyaan warbixin waxqabad oo sanad le ah ayey ahayd sida ku cad xeerka ismaamulka gobolada & degmooyinka JSl xeer Nam #23.
Dadkii Hargeysa daganaa waxay noqdeen wax daad qaaday, wax dayac & darxumo u dhintay iyo qaar la kacaa-kufaya sidii ay u dabooli lahaayeen noloshoodii oo la, baahiyihii Aasaasiga ahaa, iyada oo baahiyihii aas-aasiga ahaa ay noqdeen kuwo aaney bulshadii oo dhani goyn kareyn sida Waxbarashadii, Caafimaadkii, Nalkii, Gaadiidkii dadweynaha IWM. cidii goddalooladaa buuxin lahayd waa Dawlada Hoose lakiin waxay u eegtahey in aynu WARAABE HILIB KU RARANEY.
Xoghayihii u danbeeyay ee Dawladda Hoose laga badelay bishii Labaad ee sanadkan 2018 Mudane Cali Xassan Cawaale waxa uu soo bandhigay cadeymo sheegaya maamul xumada ka jirta Dawladda Hoose ee Hargeysa & waliba lunsiga hantida umada ee ay caadeysteen, Taa badelkeedii waxa uu ku mutaystay in ay dawladda dhexe ka xayuubiso xilkii ay u igmatey. Aqoon gaar ah uma lihi balse waxa uu soo qaatey arrimo ay tahey in laga garaabo oo aan layska indho tirin.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo magacawda xilkan isla Wasaaradaas ayaanu u diraa wixii xog ah xoghayaha Dawlada Hoose. Iyada ayaa inoo qaabilsan arrimaha Dawladaha Hoose oo dhan walaw aanay ahayn hawsha ugu weyn ee ay hayso oo ay xooga saaraan Nabadgalyada wadanka Gudihiisa. Way jiri karaan xurgufo shaqsiyeed iyo isa-seeg siyaasiyan ku qotoma meelo kale, siday doontaba ha ahaatee haddii aanu nahay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa aanu xaq u leenahay in uu Mayor Soltelco naga jaahil saaro eedaymaha uu usoo jeediyay Xoghayuhu isaga oo na tusaya oo na taabsiinaya wax uu ku beeninayo dhamaan qodobada u soo qaatey.
Waxa uu sheegay in ay jiraan shaqsiyaad aan sharcigu ogolayn oo saxeexa kharashaadka dawladda hoose, sidoo kale waxa uu tibaaxay inuu jiro maamul xumo weyn oo ku jirta hantida dawlada Hoose ee Hargeysa oo ka mid yahay mishiinka Jayga ridqa ee Abaarso (Crusher) kaasi oo ay dawlada hoose gacanta ku hayso balse marka uu ka shaqeeyo hawlo ka baxsan kuwa dawladda hoose ee uu dakhli soo xareeyo in aan dakhligaasi soo galin qasnada Dawladda Hoose ee Hargeysa iyada oo kharashka uu baahan yahay qalabkaasi hadday noqoto Mushahar shaqaale, shidaal & wax ala wixii kale ee uu baahdo laga saaro qasnada dawladda hoose.
Sidoo kale waxa ay Dawladda Hoose ee Hargeysi leedahay Hanti Maguurto ah oo ay ka mid yihiin Sariibado & Bacadlayaal laga kireeyo shacabka, lacagaha kirada ahna ay tahey in qasnada dawladda hoose ay kusoo dhacdo balse ay gacmo gaara ku jiraan iyada oo ay maamulka qaar ka mid ahi si hoos ahaana dad kale ugu wareejisteen.
Sida oo kale waxa uu tibaaxay Xoghayihii hore dhulka danta Guud oo si sharci darro ah loogu takrifalo. Waynu ogsoonahay dhul kasta marka la qorshaynayo waxa laga jaraa dhul Dan Guud ah oo loogu talo galey in dadka meesha ku dhaqan/dhaqmi doona looga sameeyo Iskuulo, Masaajido, Madarasado, Xarumo caafimaad IWM. Balse wali aynaan hayn dhul Danguud loo jaray oo la hadal hayo. Waxaan iyana aan meesha ka maqnayn Gaadiid badan oo ku magacaaban Dawladda Hoose balse ay dad gaar ahi dano gaar ah uga faa,iideystaan.
Iyada oo waxaasoo dhami jiraan maalintii xil wareejinta Xog-Hayuhu qodobada wuu kaga Hadley balse nasiib darrada ina haysata badiba mudanayaashii kasoo qeyb galey xafladaasi waxay eeda saareen Mudanahaa wax u soo bandhigay. Halka ay qaar kood ku sheegeen inuu fududyahay oo aan waxba lagu aaminin kareyn taasi oo Mayirku waliba u raaciyey in uu iska sahayday in xil danbe oo dawladeed in loo magacaabo. tolow ma isaga ayaa xilalka dawladda qaybiya mise waxa uu ina leeyahay Dawladda oo dhan baa musuqmaasuqa cid wax sheegsheegtana looma baahna? Bal adba.
Maayir bal waxa aad noo cadeysaa dhamaan arrimahaas iyada oo indhahaygu macalin noo yihiin oo maanta dayaca Caasimada ka muuqda iyo diifta haysata dadka danyarta ah aanu arkeyno. Waxa ayaan darro ah in Wasiirkii loo igmaday inuu mas,uul ka noqdo arrimahan aanu waxba ka qaban ee uu badelayba.
Sida aan kusoo qaatey maqaalka Dawladaha Hoose ee Soomaalilaan aan kaga hadlayeyhttp://gaarabidhaan.blogspot.com/2018/05/dawladdaha-hoose-ee-soomaalilaan.html qodobka 29 aad ee Xeerka ismaamulka Gobolada & Degmooyinka oo sheegaya siyaabaha loo kala diri karo Mudanayaasha Gollaha deegaanka waxa ku xusan oo kamid ah qodobada lagu kala diri karo Marka ay (3) kalfadhi oo is xiga sabab la’aan, Degmooyinka Darajada “A” & “B” fadhiyadoodu u qabsoomi waayaan. Degmooyinka Darajooyinka C, & D hadii 4 Kalfadhi oo isku xiga sabab la’aan u qabsoomi waayaan. Gollaha Deegaanka ee Hargeysi way baal mareen qodobkaa walina way soo taagan yihiin.
Xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa in la sameeyo Wasaarad u gaar ah arrimaha Dawladaha Hoose taasi oo u hagar baxda kana shaqeysa kor u qaadida aqoontooda la xidhiidha maamulka deegaanka & xirfadaha kale ee kor u qaadaya shaqaalaha Dawladaha hoose & Xildhibaanadaba. Ugu yaraan waa in ay meesha yimaadaan amaba isasoo sharaxaan dad aqoon u leh dawladaha hoose iyo hawlaha ay qabanayaan.
Sababta oo ah wax qabadka xukuumadaha waxa laga soo dhisaa Dawladaha Hoose, iyaga ayaa ah tusaha u weyn ee xukuumadi waxqabadkeeda kusoo bandhigi karto.
https://www.youtube.com/watch?v=RUWM2WLGvIY linkagaxani waa muuqaal koobaan oo la inagu tusayo madaxweyne Erdogan sidii ay dawladiisu u badashay wadanka Turkiga iyo sidii u ahaan jirey wadanku hortii.